नेपालप्रति भारतको ‘टोन’ परिवर्तन भएको छ - Karobar National Economic Daily
नेपालप्रति भारतको ‘टोन’ परिवर्तन भएको छ
query_builderAugust 27, 2017 8:54 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2313
सुरेन्द्र कार्की (राम) नेता, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेन्द्र कार्की (राम) वैचारिक क्षमता भएका नेता हुन् । पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहिसकेका अध्ययनशील र तार्किक मानिने कार्की नेपालले अब मौलिक विकास रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
देश अहिले राजनीतिक रूपमा सही मार्गमै अघि बढिरहेको भन्ने कार्की नेपालको राजनीतिमा उग्र विचारलाई स्थान नभएको बताउँछन् । भारतको कूटनीति आक्रामक रूपमा अगाडि आइरहेकाले त्यसलाई बुझेर नेपालले अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।
भारतभित्र औपनिवेशिक संस्कृतिको प्रभाव त्यहाँका बुद्धिजीवी, नीति–निर्मातामा विद्यमान रहेको बताउने उनै माओवादी नेता कार्कीसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र अबको निकासका बारेमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार :
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ? सामान्य नियमितता मात्र हो वा अरू केही अर्थ छ यो भ्रमणको ?
हामीकहाँबाट ‘फ्रिक्वेन्ट्ली’ यस्ता भ्रमण हुने गरेका छन् । प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारत जाने गर्छन् र त्यसलाई लिएर टीकाटिप्पणी पनि हुन्छ । कतिपय त साना देशको बाध्यता पनि हुन्छ । जस्तो, भारतबाटै कतिपय नेता संयुक्त राज्य अमेरिका जान्छन् ।
अमेरिकामा उनीहरूले त्यो पहुँच पाउँदैनन्, जुन साना देशमा जाँदा पाउँछन् । मुख्य कुरा, हामीकहाँ प्रतिबद्धता धेरै गर्ने तर सरकारको स्थायित्व नहुने गर्छ । तर, भारतीय सत्ता अपेक्षाकृत रूपमा स्थायी छ । प्रतिबद्धताअनुसार कार्यसम्पादन नहुने गर्दा भारतीय सत्ता रिसाउँछ । यो बीचमा भारतको कूटनीति आक्रामक रूपमा अगाडि आइरहेको छ ।
अहिलेको भारतको नीतिलाई राम्रोसँग बुझेर यस्ता भ्रमण, छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले नै धेरै कुरा केही हुनेवाला छैन । परिस्थितिमा केही फेरबदल आएको छ । संविधान कार्यान्वयनको कुरामा नेपाल अगाडि बढेको छ । एउटा कुरा त भारतका बुद्धिजीवीहरूको दृष्टिकोण नै सकारात्मक छैन । उनीहरूले नेपालको अध्ययन गर्दैनन्, त्यसै बोल्छन् ।
हिजो म केही पुरानो टेलिभिजनको रेकर्ड हेर्दै थिएँ । त्यसमा अहिले नेपालमा नागरिकताको जुन नियम संशोधन हुँदै छ त्यो नियम पहिला भएको भए त्यति बेलाका रामवरण यादव राष्ट्रपति नै हुँदैनथे भनेर तर्क गरिएको पाएँ । ठूला भनिने बीजेपीका एक जना राजनीतिज्ञले त्यस्तो तर्क गर्दै थिए । अहिले नेपाल बुझेको राजनीतिज्ञ भारतमा बहुत कम छन् ।
पहिला भारतमा समाजवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू हाबी रहेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल बुझेका नेताहरू थिए । अब अहिले भारतीय सत्तामा र विपक्षमा पनि नेपालका बारेमा असाध्यै कम जानकारी भएका नेताहरू छन् भन्ने कुरा उनीहरूका अभिव्यक्तिबाट पनि थाहा हुन्छ ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यलाई कसरी लिनुभएको छ ?
परिस्थितिमा अहिले कति फेरबदल आइसक्यो त्यो पनि बुझ्नुप¥यो । भारतको जायज चाहनालाई नेपालले सम्बोधन गर्छ । तर, भारत धेरै वर्षसम्म उपनिवेश रहेकाले भारतभित्र औपनिवेशिक संस्कृति पनि त्यहाँका बुद्धिजीवी, नीति–निर्मातामा विद्यमान छ ।
ठूलो भेटे लम्पसार परिहाल्ने र साना देखिहाले आँखा तरिहाल्ने खालको छ । तर, अहिले नेपाली जनता आफंैले बाटो तय गरेर निरन्तर अघि बढेका छन् । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको जुन संयुक्त वक्तव्य आयो, त्यसको भाव हेर्दा पनि भारतले विस्तारै बुझेको जस्तो देखिन्छ ।
तर, भारतका बुद्धिजीवीहरूले पनि हिजो नाकाबन्दी गरेर गल्ती ग¥यौं भनिरहेका छन् । आफूले अतीतमा गरेको कुरा सच्याउने तर विगतमा गल्ती ग¥यौं चाहिँ भन्न नसक्ने ठूलो राष्ट्रको जुन अहंकार हो त्यो पनि संयुक्त वक्तव्यमा देखिन्छ ।
नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेको भारतले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भने संविधानको सफल कार्यान्वयनको शुभकामना दिएको छ । यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
नेपालप्रति भारतको ‘टोन’ चेन्ज भएको छ । तर, अझै उसको सबैलाई मिलाएर, समेटेर जानु भन्ने अर्ती–उपदेश पनि छ । अब त्यही अर्ती–उपदेश हामीले उनीहरूलाई दिने हो भने के हुन्छ ।
उनीहरूको विभिन्न भूभागमा जुन प्रकारको अशान्ति, उपद्रो, असन्तोष छ, त्यसमा हामीले पनि बोलिदिने हो भने के हुन्छ ? भारतले अझै पनि ख्याल गर्न नसकेको देखिन्छ । किनभने स्वाभिमान, सार्वभौमसत्ता भनेको सानो देशको सानो हुने र ठूलो देशको ठूलो हुने भन्ने हुँदैन ।
नेपाल–भारत मामिलालाई निकै नजिकबाट हेर्नुहुन्छ । नेपालमा अहिले भारतको खास चासोचाहिँ के हो जस्तो लाग्छ ?
पहिलो कुरा, हामी जुन प्रकारले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक ढंगले भारततिर आश्रित छौं त्यो अवस्था रहिरोस् भन्ने चाहन्छ भारत । दोस्रो कुरा, स्वभाविक रूपमा चीन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बलशाली भएर आएको कुराले हरेक बेलामा उसलाई सरोकार राख्ने बनाइदिन्छ । नेपालले भारतको चासो बुझ्नु नै मुख्य कुरा हो ।
त्यो बुझेर यी चासोचाहिँ तपाईंका जायज छन्, यी नाजायज छन् भन्न सक्नुपर्छ । एउटा संस्थापन पक्ष र भारतका जनता बुद्धिजीवीका बीचमा नेपाललाई बुझाउने अभियान गर्नुपथ्र्यो, त्यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ ।
भारतको चासोको मूल्यांकन गरेर जवाफ फर्काउन सक्ने नेतृत्वको त अभाव छ नै । बरु भारतको नाजायज चासोमा म बढी उपयोगी हुन सक्छु भनेर उसको मतियार बन्न खोज्नेहरू नै राजनीतिक दलहरूमा बढी छन् भनिन्छ नि ?
यो त जानेदेखिएकै कुरा भयो । भारतलाई खुसी पार्न नसक्नेहरू सत्तामा हाबी हुन नसक्ने, खुसी पार्नेहरू सत्ताको वरिपरि रहने भन्ने केही वास्तविकता, केही मिथक रहेको छ ।
तर एउटा कुरा, नेपाली राजनीतिज्ञले पनि के बुझ्नुपर्छ भने भारतीय सत्ताको सेकताप पाएका नेताहरू लामो समय टिकेका छैनन् । उनीहरू लामो समय नेपालमा हाबी रहेका छैनन्, जसले भारतीय सत्तासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएका थिए, उनीहरूको नेपालमा हैसियत राम्रो भएन ।
अलिकति भारतकै आन्तरिक मामिलाको चर्चा गरौं । गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? किन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ?
त्रिणमूलको सरकार छ । बंगाली राष्ट्रिय अहंकारलाई अहिले ममताले पनि उठाइरहेकी छन् । गोर्खाल्यान्डको पक्षमा रहेकाहरूले गोर्खाल्यान्डमा रहने अरू जातिलाई पनि आन्दोलनमा समेट्न ध्यान दिएनन् । आन्दोलनको सबभन्दा कमजोर पक्ष यही रह्यो ।
प्रस्तावित गोर्खाल्यान्डमा जहाँ सन्थाल, उराउ, मेच, कोच थुप्रै जाति छन्, उनीहरूलाई समेटेर आन्दोलनको हिस्सा बनाउने कुरामा गोर्खाहरूले ध्यान दिएनन् । मेघालय अलग राज्य हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन उठेका बेला त्यहाँका घासी, गारो, त्यहाँका नेपाली सबैले आफ्नो ढंगले आन्दोलनमा एकजुट भएर प्रदर्शन गरेका थिए । तर, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा अरू जाति सहभागि भएनन्, तर पनि भारतीय प्रजातन्त्रको परीक्षा त्यहाँ हुन्छ । भारत कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने त्यहाँ देख्न पाइन्छ ।
दोक्लामको विषयले भारत र चीनबीच दूरी बढिरहेको छ र यो युद्धकै तहसम्म जान सक्ने कतिपय सुरक्षा मामलाका जानकारहरूले बताइरहेका छन् । के देख्नुहुन्छ ?
एकले अर्कोलाई सिध्याउने, हराउने, हातै उठाउने आत्मसमर्पण नै गराउने युद्ध अब हुँदैन । कहिलेकाहीँ ठूला देशलाई सानो स्केलको युद्ध गर्ने वा गर्न खोजेजस्तो देखाउने आफ्नै बाध्यता हुन्छन् ।
सेनामा जुन अल्छीपन आउँछ त्यसलाई युद्धको कुराले मात्र फुर्तिलो बनाइदिन्छ । अर्को कुरा, उनीहरूले रक्षामा यति धेरै बजेट खर्च गरेका हुन्छन्, त्यसलाई जनताको अघि न्यायसंगत ठहराउन पनि सानो स्केलको युद्धको जरुरी पर्छ । कहिले देशैभित्र समस्या भयो भने ध्यान हटाउन युद्धतिर देखाइदिने गरिन्छ ।
जस्तो भारतमा अलिकति कुरा केही भएपछि भारतका मिडिया हेर्नुभयो भने पागलपन भन्न सकिन्छ । पाकिस्तानतिर देखाएर आफ्ना कमी–कमजोरी छोपछाप पार्ने, मान्छेका स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गर्छन् । त्यसका लागि पनि कहिलेकाहीँ युद्ध गर्ने गर्छन् ।
देशभित्रको अन्तरविरोधलाई किनारा लगाउन पनि यस्तो हुन्छ । भारत र चीनको बीचमा पूर्ण आकारको युद्ध अहिले हुँदैन । दुवै ‘न्युक्लियर’ पावर हुन् । तर, युद्ध गर्न खोजेजस्तो, अलिकति राष्ट्रवादको भावना जगाउन सानो स्केलको मुठभेड हुन सक्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री भारत गएर देशकै शिर निहुराए, प्रतिपक्षीलाई वास्तै गरिएन भन्ने गुनासो पनि एमालेका नेताहरूले गरेका छन् । अवस्था त्यस्तै हो ?
नेपालमा ४ हजार फिटभन्दा मुनिका मान्छे मात्र राष्ट्रवादी छन् प्रायः । मैले भूगोलको साइज हेरेर भनेको होइन । सत्तामा पुगेका मान्छेहरू भारत पुग्दा बेग्लै कुरा गर्छन् । नेपालको विमानस्थलमा आएर अर्कै कुरा गर्छन् । उनीहरूको कुनै ‘इन्टिग्रिटी’ देखिँदैन ।
परम्परागत कम्युनिस्टहरूमा जानुभयो भने उनीहरू देशभक्तिको कुरा गर्छन् । राष्ट्रवादको कुरा गर्दैनन् । विकसित जाति नै राष्ट्र हो भन्ने एउटा छ । अब हिजोको राष्ट्रवादको परिभाषा संकुचित थियो ।
त्यसमा मुसलमान, महिला, जनजाति, सेती, भेरी, महाकालीका जनता छैनन् । काठमाडौं खाल्डोमा जो सम्भ्रान्त छन् उनीहरूको हितमा र अरू जनतालाई बेबकुफ बनाउन अरू देशको विरुद्ध केही बोल्थे । त्यसैलाई राष्ट्रवाद भनिन्थ्यो । जनताको समग्र हितप्रति जो धेरै प्रतिबद्ध छ उही सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी हो ।
मुलुकमा संविधान जारी भए पनि मधेसकेन्द्रित दलले असन्तुष्टि राखिरहेका छन् । हाम्रो राष्ट्रियतामाथि ‘पहाडे राष्ट्रवाद’को नारा दिएर शंका गरियो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । के भन्नुहुन्छ ?
भारतले पनि नेपाललाई चिढ्याउनका लागि हाम्रा भारतीय मूलका हुन् भन्ने गर्छ । पहिला त यहाँका क्षेत्री–बाहुनलाई पनि भारतीय मूलको भनेर भन्ने गथ्र्यो । यसपालि नाकाबन्दीका बेलाचाहिँ यी खस क्षेत्री–बाहुन हुन् भनेर भन्यो ।
यहाँका जनजातिले पनि त्यतिबेला बुझे होलान्, नत्र नेपालका आमजनजातिले पनि क्षेत्री–बाहुनलाई भारतबाटै आएका भन्ने गर्थे । उनीहरूले पनि स्पष्ट बुझे— यी त अर्कै जाति रहेछ भनेर । अब जहाँसम्म तराई–मधेसको कुरा हो ठूलो जनसंख्या पहिलेदेखि नै त्यहाँ थियो । ठूलो संख्यामा हाम्रै मधेसी छन्, केही आए होलान् पछिल्लो कालमा ।
त्यसमा अब मधेसीहरूले आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन पहाडेले भन्दा केही अतिरिक्त गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने जति पहाडे राष्ट्रवादी छन्, मधेसी पनि त्यति नै राष्ट्रवादी छन् । मधेसमा आन्दोलन भएपछि सुरुमा पहाडेहरू भागे । त्यसपछि मधेसीहरू पनि भागे । त्यहाँ अशान्ति र आबारागिरी बढेपछि मधेसीहरू, पहाडेहरू राजमार्ग उत्तर आए सुरक्षित हुनका लागि ।
एउटा मधेसी पनि दरभंगा, मधुवनी, पटनातिर गएको उदाहरण भेट्नुहुन्न । त्यहाँबाट भागेका मधेसीहरू या त विराटनगर गए, कि काठमाडौं आए । एउटा मधेसी वीरगन्जबाट भागेर भक्तपुरमा चार आना जग्गा किन्छ, हेर्नुस् । जबकि त्यो चार आना किन्ने पैसाले दरभंगामा बिल्डिङ आउँछ ।
भारतमा धेरै सस्तो छ । उता गएर बिल्डङ किन्नुको साटो भक्तपुरमा चार आना किनेर टहरा बनाउँछ भने त्यो मधेसीलाई के भन्नुहुन्छ ? उसले राष्ट्रवादी बन्न के गर्नुप¥यो ? कहाँ जानुप¥यो ? त्यसकारण के हो भने मधेसी जनतालाई चिनेर उनीहरूसँग संवाद गर्न काठमाडौं चुकेको छ ।
सबै पोखरीमा केही न केही मरेका गन्हाउने माछा त हुन्छन् नै । त्यो पहाडको पोखरीमा पनि होला, मधेसको पोखरीमा पनि होला । त्यसको अर्थ पोखरी नै खराब भन्ने हुँदैन । सीमाको रक्षा मधेसी जनताले नै गर्छन् । सीमा मिचिएको खबर उनीहरूले नै गर्छन् । लाठीमुंग्रो उनीहरूले नै खान्छन् । मधेसी जनतालाई विश्वास गरेर काठमाडौंले अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
अहिले राजनीति सबभन्दा जटिल त्यहीँ गएर भएको छ । ठूलो जनसंख्या त्यहाँ बस्छ । तिनीहरूलाई अविश्वास गरेर तिमी राष्ट्रवादी होइन भनेर गइयो भने त्यसले गलत ठाउँमा पु¥याउँछ ।
मधेसमा मधेसी समुदायलाई भड्काउन खोज्नेहरूले पनि चलखेल गरिरहेको देखिन्छ नि ?
त्यस्तो पहाडमा पनि छ । प्रजातान्त्रिक विचारले ठाउँ पाएन भने उपद्रो विचारले ठाउँ पाउँछ । अहिले प्रजातान्त्रिक विचारले राम्रो स्थान पाइरहेको छ, उग्र विचारलाई ठाउँ छैन । संसारमा उग्रवाद, जब अरू प्रकारको प्रजातान्त्रिक गतिविधिलाई चल्न दिनु हुन्न त्यहाँ उग्रवाद झ्याँगिन्छ ।
केही मान्छेमा केही उग्र गर्ने रहर होला । केही मान्छे जो अहिले मधेसमा उग्र कुरा गरिरहेका छन् न तिनलाई इतिहासको ज्ञान छ, न समाजको ज्ञान छ । तिनीहरूले लेखेका पुस्तक, पम्प्लेट हेर्दा हास्यास्पद छ । दन्त्यकथा लेखेर कहाँ राजनीतिक आन्दोलन हुन्छ ? नेपाल अहिले ठीक–ठीक ढंगले अगाडि गइरहेको छ ।
असोज २ गते प्रदेश २ मा निर्वाचन गर्नु छ । प्रदेश र संघको निर्वाचनको गृहकार्य पनि भइरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलको संविधान संशोधनको माग बाँकी नै छ । यसले संविधानको कार्यान्वयन गराउन कस्तो भूमिका खेल्छ ?
निर्वाचन हुनु पनि संविधान कार्यान्वयन हुनु हो । जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, संविधानसँग थुप्रै गुनासो राख्ने पक्षलाई पनि संविधानले उसका गुनासा, असन्तोष, आक्रोशहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने ग्यारेन्टी दिएको छ ।
संविधानमा यो–यो भा’ छैन, तुरुन्न्त संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । संविधानले त्यो अधिकार दिएन भनेचाहिँ असंवैधानिक बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, संविधानले नै तपाईंले चाहेअनुसारको संशोधन गर्न पनि उपाय दिएको छ । तपाईं जनमत बनाउनुस्, तपाईंको पक्षमा चाहेको संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसकारण संविधानभन्दा बाहिर गएर असंवैधानिक काम गरिरहनुपर्ने जरुरी तत्काललाई छैन ।
राजनीतिक मुद्दामा देश लामो समयदेखि अल्झिएको छ । आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्न के गर्नुपर्ला ?
नेपालको मौलिक विकास रणनीति के हो । विदेशबाट लगानी ल्याउने, बिजुली निकाल्ने भनेर मात्र हुँदैन, त्यो भाषण त कांग्रेसले पनि गर्छ, एमालेले पनि गर्छ, माओवादीले पनि गरिरहेको छ । अथवा दल काम छैनन् भन्नेहरूले पनि झन् चर्को ढंगले गरिरहेका छन् ।
यही हो त नेपालको विकासको मोडल ? यसरी हुन्छ त विकास ? यिनले कहिले बोलाउँछन् र लगानी गर्न जाउँला भनेर बाहिर पोको बोकर को बसेको छ र ? यो वाइयात कुरा हो । नेपालले आफ्नो मौलिक विकास रणनीति बनाउनुपर्छ ।
अब मौलिक विकास रणनीति ल्याउनुपर्छ । कस्तो प्रकारको समाजवादी गणतन्त्रमा जाने हो ? त्यो प्रकारको राजनीति कार्यक्रम आउनुपर्छ । विकासको कार्यक्रम आउनुपर्छ । सबै नेपाली जातिलाई एक ठाउँमा जोड्नुपर्छ । भोलि एउटा मात्र नेपाली जाति बनोस् । नेपाली जाति बन्नैपर्छ । म त कम्युनिस्ट हुँ । अन्तर्राष्ट्रियतावादी हुँ । संसारका सबै जाति एकै हुनुपर्छ भन्ने मान्छे ।
नेपालका जातिलाई त जोड्नुप¥यो, तर कोही तल छ, कोही माथि छ । मिल भनेर त मिल्दैन । आँखा चिम्लेर भन्न सकिन्छ, थारु धेरै पछौटे होला मधेसमा, पहाडमा तामाङ होला, लोपोन्मुखमा हायुहरूको हैसियत सबभन्दा कमजोर होला राउटेहरूपछाडि । चेपाङलाई एउटा विकसित जाति कसरी बनाउने ? दलित, जनजातिलाई कसरी माथि उठाउने ? हामीले समाजवादी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यो कार्यक्रम नल्याई भावनात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिले जो छ, उसले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो, तर पनि विकासको कुनै मोडल ल्याउन सकेन । माओवादी पनि चुक्यो नि होइन ?
संघीयतालाई पनि हामीले बढी भावनात्मक रुपमा बुझ्यौं । अहिले भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले बुझे— माओवादीले संघीयता भनेको त तल सरकार ल्याउने, हाकीमहरुलाई तलै झार्ने । जिल्लाको अधिकार ल्याउने भनेर ।
हामीले यो गर्न खोजेका हौं भनेर पहिला भनेनौं । भावनामा बग्यौं । ताम्सालिङ, मगरात, किराँत भन्यौं । किराँतमा बस्ने क्षेत्री–बाहुनले हाम्रो के त भनेर सोचे । मगरले सोचे— म त मगरात जानुप-यो, नत्र मेरो के भनेर सोच्यो । बढी भावनात्मक भयो । हामी राज्यलाई यसरी पुनर्संरचना गर्न चाहन्छौं । यसरी अधिकार तलसम्म पु-याउन चाहन्छौं भनेर बुझाउन सकेनौं ।
केही त हाम्रो सोचमा पनि त्रुटि थिए । केही त हामीले राम्रा सोचेका कुरा पनि जनतालाई बुझाउन सकेनौं । त्यसो हुनाले अहिले पनि एक प्रकारको अन्योल छँदैछ । तर, यसपटक निर्वाचनमा जाँदाखेरि देखियो, नेपाली जनताले संघीयता भनेको के हो, व्यवहारमा बुझे । यसरी हामीले नेपाली जनताले बुझ्ने, समेट्ने र अगाडि लिएर जाने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) सुरेन्द्र कार्की पूर्वसञ्चारमन्त्री